(tonga teto avy amin'ny Africa)
I Afrika dia kaontinanta iray manana velara-ntany 30 221 532 km2 miaraka amin'ny nosy manodidina azy. Ny velaran-taniny dia 20,3%-n'ny velarantany totalin'ny Tany ary 6%-n'ny velarantany manontolo. Mahatratra hatramin'ny iray lavitrisa ny isan'ny mponina ao aminy tamin'ny taona 2010, izany dia 16,14%-n'ny mponina eran'izao tontolo izao. I Afrika dia voafaritry ny Ranomasina Mediteranea any avaratra, ny Lakandranon'i Suez sy ny Ranomasina Mena any avaratra atsinanana, ny Ranomasimbe Indiana any atsinanana ary ny Ranomasimbe Atlantika any andrefana. Misy firenena 48 miaraka amin'i Madagasikara, ary 53 miaraka amin'ny tamba-nosy rehetra I Afrika.
Mamaky an'i Afrika ny Fehiben-tany ary betsaka ny toetany ao aminy: miovaova any avaratra, mafana ary tsindraindray misy tanimaty eo amin'ny zana-pehintany roa miampita azy koa ary mafana sy manorana manodidina ny Fehiben-tany.
1.1 Talohan'ny Tantara
3.1 Fizaram-paritra ao Afrika
3.1.4 Faritra Atsimon'i Afrika
Tao Afrika no nipoiran'ny karazan'olom-belona homo sapiens.
Talohan'ny Tantara[hanova | hanova ny fango]
Araky ny mpahay tantara dia tao Afrika no nipoiran'ny karazan'olona Homo Sapiens izay saika hita eran'izao tontolo izao ankehitriny. Araka ny teôrian'ny "Out of Africa" (Mivoaka an'i Afrika) dia tamin'ny taona 80.000 hatrany amin'ny 50.000 tal. J.K. tany ho any ny olona no nivoaka ny kaontinenta, niampita ny Ranomasina Mena tamin'ny alalan'ny Bab-Al-Mandaab sy ny andilan-dranomasin'i Jibraltara ary ny lakandranon'i Suez.
Tamin'ny Andro Taloha, ireo fanjakana fanta-daza sy namela lova an-tsoratra dia ny Fanjakan'i Ejipta, ny Fanjakan'i Koso, i Meroe, Ny Fanjakan'i Aksoma, i Kartajy ary i Zimbaboe Lehibe.
Tao Ejipta no nipoiran'ny tantara an-tsoratra tao Afrika. Ny tetiandro nampiasain'ny Ejipsiana tamin'izany fotoana izany dia natao hamantarana ny fotoana nisian'ny kolontsain'ny Andron'ny Varahina sy ny Andron'ny Vy tao amin'ilay faritra. Tamin'ny taona 1567 tal. J.K. hatramin'ny taona 1080 tal. J.K. no nena nirapiratan'ny sivilizasiôna ejipsiana.
Namarana ny fisian'ny sivilizasiona klasika tao Afrika Avaratra ny fanafihan'ny Vandala tamin'ny taonjato faha-5. Nanangana fanjakana iray manana an'i Kartazy ho renivohitra izy ireo tamin'ny taona 429. Lavo tamin'ny andron'ny Empira Bizantina ilay fanjakana tamin'ny taona 533.
Ny isan'ny fitondrana an-toerana tao Afrika talohan'ny fanjanahan-tany dia heverina fa any amin'ny 10 000 any ho any. Izy ireo dia samy manana ny firafitra ara-politikany. Anisan'ny fanjakana lehibe namela lova ny Fanjakan'i Akàna, ny an'i Edo, ny an'i Iôroba ary ny an'i Igbô tao Afrika Andrefana. Ny tao Afrika Atsinanana indray dia nisy ireo fanjakana soahily teo amin'ny morontsiraka atsinanana.
Tamin'ny taonjato faha-9 dia nisy ireo fanjakana mampandova fahefana toa ny fanjakana madinika Haosà, izay nivelatra eran'ny tany rakotra bozaka ao Afrika Andrefana (avy eo amin'ny tany misy an'i Malỳ ankehitriny hatrany atsimon'i Sodàna). Misy ihany koa ireo fanjakana toa ny Fanjakan'i Ganà, ny an'i Gao, na ny Empiran'i Kanem-Bôrno. Lavo tamin'ny taonjato faha-11 i Ganà. Nandimby azy ny Empiran'i Malỳ, izay avy ao andrefan'i Sodàna ankehitriny hatrao Senegaly. Nanaiky ny finoana silamo tamin'ny taonjato faha-11 ny Kanema.
Nampifanarahina tamin'ny fomba fitondram-panjakan'ny Ôiô ny rafi-pitondra-mpanjakan'i Ife. Ny mpanjakany ("oba") izay antsoina hoe Alaafin an'i Ôiô dia nandrindra tanàna fanjakana maro na iôroba na tsy iôroba. Anisan'ny fanjakana tsy iôroba fehezin'ny Ôiô ny Fanjakana fôna an'i Dahomey.
Ny firenena mivelatra indrindra any Afrika dia ny Sodàna manana velarantany 2,50 tapitrisa km2. Ary ny firenena kely indrindra dia ny tambanosin'i Seisela 1 300 km any avaratr'i Madagasikara.
Fizaram-paritra ao Afrika[hanova | hanova ny fango]
Misy firenena sasany izay voasokajy anaty faritra roa na telo.
I Afrika Andrefana dia faritra ao Afrika izay mahafaoka ny ampahany andrefana amin'i Afrika atsimon'i Sahara. Ireto avy ny firenena heverina fa isan'i Afrika Andrefana: I Benîno, i Borkina Fasô, i Cabo Verde, i Kôtidivoara, i Gambia, i Ganà, i Ginea, i Ginea Bisao, i Liberia, i Maly, i Maoritania, i Nizera, i Nizerià, i Senegaly, i Siera Leôna ary i Tôgô.
I Afrika Atsinanana dia faritr'i Afrika izay mahafaoka firenana afrikana maromaro ao amin'ny tapany atsinanan'i Afrika, izay matetika manondro ireo firenena ao amin'ny Lohasahan'ny Hantsana Lehibe. Ireto avy ny firenena sy fanjakana heverina fa isan'i Afrika Atsinanana: i Eritrea, i Etiopia, i Jiboty, i Somalia, i Sodàna Atsimo, i Kenia, i Oganda, i Tanzania, i Roanda, i Borondy, i Seisely, i Kômôro sy i Maiôty, i Maorisy, La Réunion, i Madagasikara, i Malaoy ary i Mozambika.
Faritra Atsimon'i Afrika[hanova | hanova ny fango]
Ny Faritra Atsimo ao Afrika dia ny tapan'i Afrika ao atsimo izay fitambaran'ny firenana sy tany ao atsimon'ny alam-pehibe afrikana. Ireto avy ny firenena heverina fa ao amin'ny Faritra atsimon'i Afrika: i Afrika Atsimo, i Angôla, i Bôtsoana, i Kômôro, i Soazilandy, i Lezôtô, i Madagasikara, i Malaoy, i Maorisy, i Mozambika, i Namibia, i Zambia, ary i Zimbaboe.
I Afrika Afovoany dia faritra ao Afrika ahitana ny tapany atsimon'i Sahara sy ny tapany atsinanan'ny ampinga andrefana afrikana ary ny lohasahan'ny Hantsana Lehibe. Ireto avy ny firenena heverina fa isan'i Afrika Afovoany: i Angôla, i Kamerona, i Gabôna, i Ginea Ekoatorialy, ny Repoblikan'i Afrika Afovoany, ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô, ny Repoblikan'i Kôngô, i Sao Tomé sy Príncipe ary i Tsady, i Malaoy, i Zambia, i Zimbaboe, i Borondy, i Roanda.
Ireto ireo fiteny be mpampiasa ao Afrika: ny fiteny arabo, soahily, frantsay, anglisy, pôrtogey, berbera, fola (na fiteny peola), afrikansa, malagasy, amharika, tigrinia, vôlôfo, haosa, zolo, lingala, bambara, sômaly, môre, iôroba, sôninke, diola, agny, bete, baole, fanga, kitoba ary soso.
Africa eo amin'i DMOZ
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrika&oldid=996390"
Voaova farany tamin'ny 10 Aogositra 2020 amin'ny 15:03 ity pejy ity.